Inona no Inoan’ny Vavolombelon’i Jehovah?
MATOAN-DAHATSORATRA | IZA MOA NY VAVOLOMBELON’I JEHOVAH?
Mino izahay fa ny “Soratra Masina iray manontolo dia avy amin’ny herin’ny fanahy masin’Andriamanitra, ary mahasoa.” (2 Timoty 3:16) Ao àry izahay no mianatra momba ny Mpamorona sy mitady torohevitra mahasambatra.
Hoy ny Salamo 83:18: “Mba ho fantatry ny olona fa ianao irery ihany, izay manana anarana hoe Jehovah, no Avo Indrindra ambonin’ny tany manontolo!” I Jehovah irery ihany àry no ivavahanay. Miezaka mampahafantatra ny anarany izahay satria Vavolombelony.—Isaia 43:10-12.
Kristianina izahay dia mino hoe “Zanak’Andriamanitra” i Jesosy, * ary tonga tetỳ an-tany izy ka lasa Mesia. (Jaona 1:34, 41; 4:25, 26) Maty izy, ary avy eo natsangana dia nankany an-danitra. (1 Korintianina 15:3, 4) Lasa Mpanjakan’ny Fanjakan’Andriamanitra izy tatỳ aoriana. (Apokalypsy 11:15) Tena misy io Fanjakana io, ary hamerina ny tany ho Paradisa. (Daniela 2:44) Hoy ny Baiboly: ‘Ny mpandefitra no handova ny tany, ka tena ho finaritra amin’ny fiadanam-be.’—Salamo 37:11, 29.
‘Mino izy ireo fa miresaka aminy Andriamanitra rehefa mamaky ny Baiboly izy ireo. Ao àry izy ireo no mitady vahaolana rehefa manana olana. Mihevitra izy ireo fa mbola mahasoa ny Baiboly.’—Benjamin Cherayath, mpitondra fivavahana katolika, tao amin’ny gazety Münsterländische Volkszeitung, any Alemaina
Mino izahay Vavolombelon’i Jehovah fa mbola mahasoa ny toro lalan’ny Baiboly. (Isaia 48:17, 18) Miezaka manaraka tsara azy ireny àry izahay. Mampitandrina, ohatra, ny Baiboly fa tsy mety ny manao zavatra manimba ny saina sy ny vatana. Tsy mifoka sigara àry izahay, sady tsy midoroka zava-mahadomelina. (2 Korintianina 7:1) Tsy manao zavatra raran’ny Baiboly koa izahay, ohatra hoe mamo sy mijangajanga ary mangalatra.—1 Korintianina 6:9-11.
^ feh. 5 Antsoina hoe “Zanaka Lahitokan’Andriamanitra” i Jesosy, satria izy no noforonin’i Jehovah voalohany sady noforoniny mivantana.—Jaona 3:18; Kolosianina 1:13-15.
Raha te hahalala ny zavatra inoanay ianao, anisan’izany ny hoe nahoana izahay no tsy mankalaza fety na tsy manaiky hampidiran-dra, dia midira ao amin’ny jw.org/mg ary jereo ao amin’ilay hoe MOMBA ANAY > FANONTANIANA FAMETRAKY NY OLONA.
Hizara Hizara Inona no Inoan’ny Vavolombelon’i Jehovah?